15 qof oo ku dhintay deegaanno ka tirsan Sh. Dhexe sababo la xiriir gaajada iyo macaluusha ka dhalatay abaarta. – Radio Daljir
15 qof oo ku dhintay deegaanno ka tirsan Sh. Dhexe sababo la xiriir gaajada iyo macaluusha ka dhalatay abaarta.
Ceel-muluq, July 19 – Inta la hubo 15 qof ayaa ku dhintay labadii toddobaad ee u dambeeyey deegaanka Ceel-muluq oo ka tirsan degmada Cadale ee gobolka Sh Dhexe sababo la xiriira gaajada iyo macaluusha ka dhalatay abaarta Soomaaliya.
Dadka dhintay ayaa iskugu jiray carruur, haween iyo dad da’ah oo ay haleeleen xanuuno iyo nafaqo-darro baahsan kaddib markii deegaannadaasi ay ku dhufatay abaar aad u xooggan oo marisay duunyadii ay dhaqan-jireen, darteedna muddo aan la intifaacsan dalaggii beeraha.
Dad kale oo aad u tiro badan ayaa la tilmaamayaa isla deegaankaasi in ay u jiifaan xanuuno iyo tabar-darri ka dhalatay gaajada iyo macaluusha ka dillaacday abaarta ku habsatay Soomaaliya siiba koonfurta iyo gobollada dhexe ee dalka.
Muqtaar Maxamed Maxamud ‘Seefaale’ oo ka mid ah dad deegaanka Ceel-muluq oo maanta u warramay Radio Daljir ayaa sheegay deegaankaasi in ay ka jirto xaalad aad u khatar ah, dadkuna ay la il-daran yihiin xanuuno, gaajo iyo nafaqo-darro aad o xooggan oo wada haleeshay carruurta iyo dadwaaweynba.
Seefaale, waxaa uu sheegay haddii aan dadkaasi si deg deg ah wax loogu qaban dhawrka maalmood ee soo socda ama aan la helin gargaar eebbe, dhammaantoodba in ay maran-doonaan.
Xaaladda abaareed ee Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyey ahayd mid sii kordhaysay waxaana maalin walba la soo sheegaa dhimashada carruur iyo haweenka aad u tiro badan kuwaasi oo dhibaatada ugu weyni ay taabatay.